Tag: fampisehoana atiny | Martech Zone
Tag: fampisehoana atiny
Vonona ny hanelingelina ve ireo mpivarotra atiny?
Tao amin'ny fanadihadiana vaovao natolotry ny Kapost avy amin'ny Aberdeen Group, ny mpikaroka dia nahita mpivarotra vitsivitsy izay mahatsapa fa mamokatra sy manara-maso tsara ny atiny. Ary misy banga azo trandrahana eo amin'ny mpitondra atiny sy ny mpanaraka atiny. Miantso ny vanim-potoanan'ny tetezamita i Kapost fa be ny fangatahana saingy tsy ampy ny famolavolana drafi-tsaina feno. Izy ireo dia namolavola ny infographic eto ambany hametrahana ireo vato misakana lehibe (sy tombontsoa) amin'ny fametrahana paikady fampandehanana votoaty mifanaraka tsara. Miaraka amin'ny rehetra
BlitzMetrics: Dashboard an'ny media sosialy ho an'ny marikao
Alakamisy, May 30, 2013 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
BlitzMetrics dia manolotra dashboard sosialy izay manara-maso ny angon-drakitrao amin'ny fantsonao sy ny vokatra rehetra amin'ny toerana iray. Tsy mila mitady metrika amin'ny sehatra sosialy isan-karazany. Ny rafitra dia manome tatitra momba ireo mpankafy sy mpanaraka anao ambony indrindra hanampiana anao amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika, firotsahana ary farany - fiovam-po. Fa indrindra indrindra, ny BlitzMetrics dia manampy ny mpivarotra hahatakatra ny fotoana sy ny atiny inona no mahomby indrindra mba hahafahanao manitsy ny fandefasanao hafatra araka ny
Sabotsy, Janoary 23, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Indraindray isika dia manao zavatra tsotra satria izany no fomba nanaovana azy. Tsy misy mahatadidy ny antony marina, fa ataontsika foana… na dia maharary antsika aza izany. Rehefa mijery ny ambaratonga mahazatra amin'ny varotra sy marketing amin'ny orinasa maoderina aho dia tsy niova ny firafitra hatramin'ny nahitan'ny olona mpivarotra nanosika ny arabe sy ny fanaovana antso an-tariby dolara. Amin'ny orinasa maro izay notsidihiko dia “varotra” maro no miseho eo amin'ny lafiny marketing amin'ny rindrina. Ny varotra dia maka fotsiny